Ukusetyenziswa kwezonyango okugqwesileyo PP Spunbond uMvelisi kunye nefektri | Henghua
Unyango amalaphu amalaphu angalukwanga ahlala enziwe ngemicu ye-polypropylene filament ngokucinezela kushushu. Inokuphefumla okuhle, ukugcinwa kobushushu, ukugcinwa kokufuma kunye nokumelana namanzi ..
Unyango 1.Medical amalaphu non-ephothiweyo zidla ezenziwe imicu ezinepolypropylene filament ngokucinezela eshushu. Inokuphefumla okuhle, ukugcinwa kobushushu, ukugcinwa kokufuma kunye nokumelana namanzi ..
Ilaphu 2.Non ephothiweyo luhlobo lwelaphu elingalukanga, elisebenzisa ngokuthe ngqo iichips zepolymer, imicu emifutshane okanye imisonto yokwenza imicu ngokuhamba komoya okanye ngomatshini, kwaye emva koko kwenziwe ihydroentangling, ukubetha kwenaliti, okanye ukuqinisa ukujija okushushu, kwaye ekugqibeleni ugqibezele Isiphumo esingeluki. Uhlobo olutsha lwemveliso yefayibha enesakhiwo esithambileyo, esiphefumlayo kunye nesicaba. Uncedo kukuba ayivelisi i-fiber debris, yomelele, yomelele kwaye ithambile. Ikwaluhlobo lwezinto zokuqinisa, kwaye ikwanomvakalelo wekotoni. Xa kuthelekiswa namalaphu omqhaphu, iingxowa zamalaphu ezingalukanga kulula ukumila kwaye zitshiphu ukuzenza
3-Amanzi agxothayo kwaye ayaphefumlwa Iqukethe i-100% yefayibha kwaye ingena kwaye iyangena emoyeni. Kulula ukugcina ilaphu lomile kwaye kulula ukulihlamba. Ukungabinetyhefu kwaye okungacaphukisi: Imveliso iveliswa ngezinto zokutya ezikumgangatho wokutya ze-FDA, ayiqulathanga ezinye izinto zeekhemikhali, inentsebenzo ezinzileyo, ayinatyhefu, ayinavumba, kwaye ayicaphukisi ulusu. I-Antibacterial kunye ne-anti-chemical agents: I-Polypropylene yinto ephosakeleyo ngokwemichiza, engadliwanga ngamanundu, kwaye inokuhlukanisa ukubola kwebhaktheriya kunye nezinambuzane kulwelo; i-antibacterial, alkali corrosion, kunye namandla emveliso egqityiweyo ayinakuchaphazeleka kukhukuliseko. Antibacterial. Imveliso igxotha amanzi, ayingundo, kwaye iyakwazi ukwahlula ibacteria kunye nezinambuzane kulwelo ukusuka kukhukuliseko, kwaye ayingundo. Iimpawu ezintle zomzimba. Yenziwe nge-polypropylene yentsontelo yentsontelo kwaye yasasazeka ngokuthe ngqo kumnatha kunye ne-thermally bonded. Amandla emveliso angcono kunalawo aqhelekileyo kwimveliso yefayibha.
Ihlala isetyenziswa kulwahlulo lokuqala nolwesithathu lweemaski, kunye ne-25g * 17.5cm, enefuthe elihle kakhulu. Isetyenziselwa iisuti zonyango kunye neekepusi zonyango ngaxeshanye, ezinokuthintela uhlaselo lwebacteria kwaye zifezekise ukhuseleko
Egqithileyo Ukusetyenziswa kwezolimo PP Spunbond Nonwoven
Non womluki Medical Ilaphu
Non womluki Ilaphu, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Ixabiso loLuhlu lweLaphu, Izinto ezingalukanga, Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo, Kk Non womluki Ilaphu,